आखाँकै ईसारामा चल्छ Samsung Galaxy-S4 | मेरो कलम
– सामसुङ ग्यालेक्सी एसथ्रीले स्मार्ट फोनको बजार पिटेको थियो । एसथ्रीमा धेरै आकर्षण फिरचहरु थिए र सोहि कारणवाट पनी प्रतिस्पर्धी कम्पनी एप्पलको आईफोन फोरएसको विक्रिलाई ठुलै धक्का लगाउन सफल भएको थियो । सामसुङ ग्यालेक्सी एसथ्रीले बजार जमाउन थालेसगै अन्य पुराना नाम चलेका स्मार्ट फोन कम्पनीहरु पछिका पछिनै भएका छन् । विक्रि र पपुलारिटीलाई हेर्दा कोरियन कम्पनी सामसुङले ग्यालेक्सी एसफोर बजारमा ल्याएसगै फेरी पनी स्मार्ट मोवाईलको बजारलाई एक पक्षिय वनाउने निश्चित छ ।
उदाहरण नेपालनै छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा पनी ग्यालेक्सी एसथ्रीको विक्रि दश हजार भन्दा वढी भईसकेको छ । ६० हजार नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा विक्रि भएको एसथ्री दश हजारभन्दा वढी नेपालीले खरिद गर्नु भनेको कुनै ठट्टाको विषय होईन । नेपाली ग्योजट्सप्रेमीहरु कतिसम्म सुविधा सम्पन्न स्मार्टफोन चाहन्छन् र यसप्रतीको क्रेज कस्तो छ ? भन्ने वुझ्न पनी एसथ्रीको विक्रिलाई नै उदाहरणको रुपमा हेर्न सक्छौ ।
नेपालमा सामसुङको स्मार्ट फोन भित्राउदै आएको आधिकारीक कम्पनी ईन्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेजका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा यसै भन्छन् “ग्यालेक्सी एसथ्री लञ्च गर्दैगर्दा के कति न अडर आउला भन्ने लागेको थियो, उच्च मुल्यकै कारण नेपालीले नरुचाउन पनी सक्छन् भन्ने थियो तर सोचेको भन्दा ठिक उल्टो भयो, दशौ हजारको सख्यामा ग्यालेक्सी एसथ्री विक्रि भईसकेको छ ।” सामसुङले आफ्नो चौथो पुस्ताको स्मार्टफोन ग्यालेक्सी एसफोर मार्च महिनामा अमेरिकामा लञ्च गरेसगै नेपालमा पनी लञ्च गरिसकेको छ ।
ग्यालेक्सी एसफोरलाई सन् २०१३ मा वर्ष उत्कृष्ठ ग्याजेट्स हुने भनेर पुर्व मुल्याकंन नगरिएको पनी होईन । यसै कारणले पनी ग्यालेक्सी एसफोरले एप्पलको आईफोन फाईभको बजारलाई गम्भिर असर पार्ने निश्चित छ । ग्यालेक्सी एसथ्रीमा भएका फिचरलाई अपग्रेड गर्दै एसफोर बजारमा ल्याईएको हुदा थप फिचर र क्वालिटीमा प्रयोगकर्ताले यो स्मार्टफोन प्रयोग पाएका छन् । व्यग्र प्रतिक्षारत नेपाली उपभोक्ताले पनी ग्यालेक्सी एसफोरको मज्जा लिन सुरु गरिसकेका छन् । नेपालमा यो स्मार्टफोनको मुल्य भने ७१ हजार ९ सय पर्ने सर्भिसेजले जनाएको छ ।
Galaxy S4 मा के छ ?
५ ईन्चको स्त्रिन डिस्प्ले भएको सामसुङ ग्यालेक्सी एसफोरलाई आखाँको ईसाराले चलाउन सकिन्छ । अचम्म त यो छ कि, आखाँकै हेराईले भिडियोको गति निर्धारण गर्न सकिन्छ । प्ले भईरहेको भिडियोलाई हेर्न छोडियो भयो भने स्वतं भिडियो पनी रोकिन्छ र पुर्न स्त्रिनमा दृष्टी लगाउनासाथ पज भएको भिडियो अटो प्ले हुनथाल्छ । यस स्मार्टफोनमा रहेका फिरचहरलाई आखैको माध्यमवाट स्क्रोल गरेर तलमाथी समेत गर्न सकिन्छ । यस्ता लोभलाग्दो फिचरकै कारणले पनी एसफोर प्रती मानिसहरु लालयित छन् ।
“सामसुङ एडप्ट डिस्प्ले” प्रकृतीप्रेमी प्रविधिवाट वाहिरी बातावरण अनुसार व्राईटनेस एवं कन्ट्रास्ट वनाएर प्रयोग गर्न सकिनेछ । एसथ्री भन्दा २० प्रतिशत वढी क्षमतावान र ठुलो व्याट्री रहेको एसफोरको ७ दशमलव ९ मिमि मोटाई तथा १ सय ३० ग्रामको तौल रहेको छ । १ दशमलव ९ गीगाहर्ज अथवा १ दशमलव ६ गीगाहर्ज प्रोसेसरका ग्यालेक्सी एसफोर प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
एसफोरमा २ जिवीको र्याम क्षमता रहेको छ भने १६ जिवी,३२ जिवी र ६४ जिवीको स्टोरेज क्षमतामा एसफोर पाउन सकिनेछ यदि यो भन्दापनी वढी मेमोरी क्षमता चाहिएको खण्डमा भने ६४ जिवि सम्म मेमोरी थप गर्न सकिन्छ । यो स्मार्टफोनमा रहेको क्यामरा अन्य क्यामरा भन्दा कम क्वालीटी छैन अर्थात एसफोरमा १३ मेगा पिक्सलको क्षमतावान क्यामरा रहेको छ । यसवाट फुल एचडीमा भिडियो कैद गर्न सक्नेछ भने फ्रन्ट साईडमा दुई मेगापिक्सलको क्यामरा राखिएको छ । पलभरमै फोटो खिच्नको सकिने लगायत सुविधा रहेको यो स्मार्टफोनमा अन्य आश्चर्यजनक विशेषता पाउन सकिन्छ । – २५ वैशाख २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित ।
सित्तैको ‘विण्डोज १०’ अपग्रेड गर्ने हैन ?
Nepali July 31, 2015
यस्तो रोचक छ ‘मोबाईल ईतिहास’
गुगल सम्वन्धी ‘१०’ रोचक तथ्य
Nepali September 27, 2012
यी हुन् उत्कृष्ठ क्लाउड स्टोरेज
Nepali April 6, 2014
britney spare May 8, 2013 Log in to Reply
wanna buy that mobile